Previous Article Ike dị n'aha Jizọs Pụrụ Ịme Ihe Ọ bụla
Next Article Ozi Buhari maka Ụbọchị Emume Mbilite N'ọnwụ Kraịst
Oke mmemme mgbape ah bụkwa nke dọtara ọtụtụ ndị e ji okwu ha agba ìzù na steeti ahụ, ndị ndú òbòdò, ndị selitere isi n'ọrụ gọọmenti, ndị na-egwu okwe ndọrọndọrọ.
Na nkenke okwuchukwu ya na ya bụ mmemme, bishọọpụ Nwokolo, onye dịrịlarịị na mbụ gọzie ya bụ ụlọ nsọ na ihe ndị e ji efe òfùfè na ya, mere ka a mara na obi Chineke jupùtara n'ịhụnanya, ọmaiko na ebere, ma dịkwa njikere mgbe ọbụla ịnabata ndị ọbụla ji obi gheere oghe wee bịakute ya.
Ọ kpọkuru ndị ụka ka ha na-eso Chineke aga ogologo ụbọchị niile nke ndụ ha, iji nata ngọzị ya bara ụba nke ukwuu.
O tòkwara ndị ụka Aglịkan na mpaghara Ọnịtsha maka ya bụ agadaga ụlọ nsọ, bụ nke ọ kọwara dịka ụlọ nsọ Chineke kwesiri ekwesi, ma mekwazie ka a mara na ọbịabịa ahụ ndị wetara oziọma bịara n'Ọnịtsha wetàrà ọtụtụ ngọzị na ezi ihe, bụ nke ọ dụrụ ha ka ha jigidesie ike.
Na ntụnye nke ya, onye Chanselọ nke dayọsiisi Niger, bụ maazị Nnamdi Ibegbu mere ka a mara na ọ bụ n'ahọ 1957 ka a tọrọbụrụ okwute ntọala nke ya bụ ụlọ ụka, ebe okwute ntọala nke ọhụụ bụ nke a tọrọ n'ahọ 2006, site n'aka onye jibụ ọkwa bishọọpụ na dayọsiisi Niger, bụ Rt. Rev. Ken Sandy Okeke. O tokwazịrị ndị gbara mbọ n'ụzọ dị iche iche iji hụ na ya bụ ọmarịcha ụlọ ụka bụ nke kwụụrụ n'oge dịka oge a.
N'okwu nke ya, onye malitere ya bụ ọrụ, ma bụrụkwa Ashịdikin nke Ọnịtsha South Ashịdikinri, bụ Venerebụụl Josiah Ọfọegbu kwuputara na obi bụ ya nnọ sọ añụrị banyere mgbape ya bụ ụlọ ụka, bụ nke o kwuru na ọ bụghị ihe dị mfe oge a malitere ya; ebe onye nke rụchapụzịrị ya, bụ ụkọchukwu nọzị ebe ahụ ugbu a ma bụrụkwa Ashịdikin nke Inland Town Ashịdikinri, Venerebụụl Joseph Nweke megasịrị ka a mara ndị ụkọchukwu rụgoro ọrụ na ya bụ ụlọ ụka, ma tòó ha n'ihi ntụnye ha, ọbụnadị dịka o kpere ka Chineke gọzie ha niile n'otu n'otu.
Ụfọdụ n'ime ndị dị iche iche sonyere na ya bụ oke mmemme gụnyere: eze ọdịnala Ọnịtsha, bụ Igwe Nnaemeka Alfred Achebe, onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Ọnịtsha Nọọtụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra, bụ maazị Chigbo Enwezọr, ndị otu Agbalanze na Otu Ọdụ nke Ọnịtsha, tinyere imirikiti ndị ọzọ.